Flipboard dia havaozina anatiny sy ivelany amin'ny kinova 4.0 | Vaovao IPhone
Hatramin'ny nanombohany ny iPad fotsiny tamin'ny taona 2010, ny Flipboard dia noheverina ho iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra, na dia tsy tsara indrindra aza, mba hamoronana magazine nomerika antsika araka ny filantsika sy / na ny filanay. Nanomboka teo, tsikelikely, dia nanampy isa maro be ho lasa fampiharana tsy azo ialana ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany maro. Ny fahatongavan'i Apple News dia hita fa fihetsik'i Apple ho andramo ny mandresy ny mpampiasa an'ity rindranasa ity, fa araka ny hitantsika ary na eo aza ny zavatra lazain'izy ireo avy amin'i Apple, kely na tsy misy ifandraisany amin'ny Flipboard.
Flipboard dia nahazo fanavaozana vaovao, namely ny kinova 4.0 miaraka amin'ny zava-baovao marobe Anisan'izany, misy interface vaovao nohavaozina miavaka, mamorona toerana tsy manam-paharoa handaminana ny tantara rehetra mahaliana na mahaliana antsika indrindra.
Inona no vaovao ao amin'ny Flipboard kinova 4.0
Famolavolana ny fampiharana feno miaraka amin'ny hitsin-dàlana vaovao mankany amin'ireo lohahevitra mahaliana indrindra avy amin'ny carousel fifandraisana vaovao sy tsara tarehy.
Gazety misy lohahevitra vaovao miaraka amin'izay rehetra mahaliana antsika indrindra, natontan'i Flipboard, izay ahitanay lahatsoratra avy amin'ireo mpanonta tsara indrindra, manam-pahaizana momba ny lohahevitra nefa tsy manadino ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina.
Nohavaozina ihany koa ny mombamomba anay, hany ka mora kokoa izao ny mahita ireo lohahevitra tiantsika, ireo mpanaraka antsika ary ireo tantara novonjinay.
Ny iray amin'ireo tombony omen'ny Flipboard antsika dia ny mety hanampiana ny kaonty Twitter sy Facebook hankafizanay ny rindrinay amin'ny fomba hafa noho ny rindranasan'ny serivisy roa, safidy iray izay atoroko manokana raha reraka ianao, indrindra ny interface Facebook mpampiasa mahazatra, satria tsy afaka miditra amin'ny alàlan'ny rindranasa ankolafy toa ny raharaha Twitter izahay.
Actualidad iPhone dia manana magazine manokana ihany koa ao amin'ny Flipboard, raha sahy manaraka anay avy amin'ity sehatra vaovao lehibe ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Flipboard dia havaozina anatiny sy ivelany amin'ny kinova 4.0